अञ्चल अस्पतालको सेवाः ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकालाई कठिन ! – इन्सेक
अञ्चल अस्पतालको सेवाः ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकालाई कठिन !
बागलुङ ०७६ जेठ ८ गते
बागलुङ नपा–७ सिगानाकी ८३ वर्षीया पवित्रा गौतम जेठ ६ गते बिहान १०ः३० बजेनै धौलागिरि अञ्चल अस्पताल आइपुगिन् ।
एक सातादेखि रुघा, खोकी र ज्वरोले च्यापेकी पवित्रालाई बुहारीले नातिसँग उपचार गराउनका लागि अस्पताल पठाएकी थिइन् । बिहानै अस्पताल आइपुगेकी पवित्राको नाम लेख्ने पालो दिउँसोको १ बजेसम्म पनि आएन ।
पछिल्लो समय विषेशज्ञ डाक्टरहरूको उपस्थिति र स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीहरूले गर्दा अस्पतालमा निकै भिडभाड हुने गर्छ ।
दैनिकजसो अस्पतालको गेटबाट टिकट काउण्टरसम्म बिरामीहरूको लाम हुने गर्छ । अस्पताल प्रशासनले बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै लाममा बसेर पालैपालो नाम लेखाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
अस्पतालले नियम बनाएको भएपनि यो नियमले न्याय भने नगरेको अस्पतालमा उपचार गराउन आएका बागलुङ नपा–३ का सरोज क्षेत्रीको गुनासो छ ।
‘हामी एकदुई जनाले वृद्धवृद्धाको दुःख देखेर भएन ।’–क्षेत्री भन्छन्–“अस्पतालमा सयौँ मान्छेहरू उपचारको लागि आएका छन् । सबैको मन एउटै हुँदैन । शारीरिक रूपमा कमजोर भएका र वृद्धवृद्धाहरूको लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।”
घुँडा दुख्ने समस्या लिएर म्याग्दी जिल्लाको बराङजाबाट उपचार गराउन आएकी ७० वर्षीया गौरी बिकको पनि समस्या उस्तै छ ।
११ बजेबाट लाइनमा बसेकी गौरी पनि १ बजेसम्म टिकट काउण्टरसम्म पुग्न सकिनन् । ‘घंँडा दुखेर उभिइ राख्न सक्दिनँ । कतिबेला लाममै बस्छु । कतिबेला आफूभन्दा अगाडि र पछाडी बस्नेलाई पालो हेर्न भनेर छेउमा आएर बस्छु ।’–गौरीले भनिन् ।
अस्पतालको नाम लेखाउने काउण्टरमा मात्र होइन, नाम लेखाई सकेपछि जाँच गराउने स्थानमा पनि त्यस्तै लामो समय पालो कुर्न बस्नुपर्छ ।
बिहान ९ः३० बजे अस्पताल आएका बागलुङ नपा–१० भकुण्डेका शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका ७५ वर्षीय लालबहादुर थापाले टिकट काउण्टर र चेकजाँच गराउने स्थानको लाइन पार गरी दिउँसो २ बजे मात्रै स्वास्थ जाँच गराए । डाक्टरले पिसाब जाँच गराउनु पर्छ भनेकोले थापा प्रयोगशालामा तेस्रो चरणको लाम बसिरहेको भेटिए ।
अस्पतालमा उपचार गराउन आउने बिरामी कोठैपिच्छे लाम बस्दाबस्दै हैरान भएको बताउ“छन् । अस्पताल प्रशासनले बिरामीको सहजताको लागि नाम लेखाउने स्थान, जाँच गर्ने स्थान, प्रयोगशाला, एक्सरे, भिडियो एक्सरे जस्ता सबै स्थानमा लाम बस्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाउँदै आएको छ ।
अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दो छ । दैनिक ३ सय भन्दा बढी बिरामीहरू उपचारको लागि आउने गरेका धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका सूचना अधिकारी तिर्थराज गौतम बताउ“छन् । बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै सबै सेवालाई व्यवस्थित बनाउने तयारी गरिएको गौतमले बताए ।
अस्पतालमा भौतिक संरचना अभावको कारणले सेवा प्रभावित भएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डाक्टर सागर राजभण्डारीले बताए ।
‘हामीले गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र बालबालिकाको बारेमा नसोचेको होइन ।’–राजभण्डारीले भने–‘अस्पतालको निर्माणधिन भवन ११ वर्षदेखि अलपत्र छ । भौतिक संरचना अभाव भएको कारणले सबैको छुट्टाछुटै व्यवस्था गर्न सकिएको छैन ।’
ठेकेदार कम्पनी आशिष मिलेनियम भीमज्योति जयबाबा नयाँबाटो जेभीले २०६६ मा सुरू गरी २०७३ असार मसान्तसम्ममा भ्याटबाहेक ६ करोड ६० लाख रुपिया“मा निर्माण गरिसक्नुपर्ने भवनको काम अहिलेसम्म अलपत्र छ ।
त्यस्तै २०७० सालमा निर्माण सुरू भएको अस्पतालको अर्काे भवनको काम ठकेदार कम्पनीले एक वर्षदेखि अलपत्र छोडेको थियो । केही समययता सो भवनको निर्माण कार्य सुरू भएको र निर्माण कम्पनीले अबको एक महिनामा निर्माण सम्पन्न गरी अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालको भवन निर्माण हुनासाथ ओपिडी, फार्मेसी र सबै डाक्टरहरूले छुट्छुटै कोठामा चेकजा“च गराउने गरी सबै सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको राजभण्डारीले बताए ।